Uzikhubaza kanjani izexwayiso zokuqeqesha ku-Apple Watch | Izindaba ze-iPhone
UJordi Gimenez | 26/10/2021 12:00 | I-Apple Watch, Okokufundisa namanyuwali
Lona ngomunye waleyo mibuzo abanye benu abasibuza yona njalo futhi yingakho sinqume ukudala lesi sifundo esincane. Empeleni lo msebenzi ukuthi kokunye yenziwe yasebenza ngokuzenzakalelayo kuzilungiselelo zewashi futhi kulula ukukhubaza.
Endabeni yami, isebenze ngokuzenzakalelayo (noma kungenzeka ngiyivule ngaphandle kokuqaphela) enguqulweni yokugcina ekhishwe yohlelo lokusebenza lwe-watchOS. Abaningi benu abanayo esebenzayo kodwa kuhle nokwazi ukuthi singayivala kanjani lezo "ikhefu lokuqeqesha" noma "indandatho yokujima iqediwe" izexwayiso, phakathi kokunye.
I-Apple Watch iyakwazi sazise ngesikhathi esithile sokuqeqeshwa futhi lokhu kunganciphisa ukugxila. Kuyinketho yokuthi esimweni sami yenziwe yasebenza yodwa, angizange ngiyilungiselele nganoma yisiphi isikhathi. Manje sesizobona ukuthi singayivula kanjani noma yenze ingasebenzi ngalezi zinyathelo ezilula. Lesi senzo singenziwa ewashini ngokwalo noma ku-iPhone, okokuqala sizobona ukuthi ungazikhubaza kanjani lezi zaziso noma izexwayiso ezivela ku-iPhone:
Sivula uhlelo lokusebenza lwe-Watch ku-iPhone
Chofoza inketho yokuqeqesha
Siskrola phezulu bese sibheka inketho yokugcina: Izimpendulo zezwi
Kuleli qophelo siyabona ukuthi kukhomba ngokusobala lokho U-Siri angasifunda izaziso mayelana nokuqeqeshwa. Senza kungasebenzi noma senze kusebenze futhi yikho nje. Ukwenza lokhu kusebenze noma ukuvala ukusebenza ngokuqondile ku-Apple Watch kufanele silandele izinyathelo ezifanayo kodwa ewashini.
Sicindezela umqhele wedijithali futhi sifinyelele Izilungiselelo. Uma sesingaphakathi sivele sibheke uhlelo lokusebenza lokuqeqesha bese sehlela ku thola inketho ethi "Izimpendulo Zezwi" okuyinto inketho okufanele siyenze isebenze noma kulokhu kungasebenzi. Mhlawumbe njengami wenze le nketho isebenze ngaphandle kokuqaphela noma yaze yenziwa yasebenza ngokuzenzakalelayo, okubalulekile ukwazi ukuthi kufanele siye kuphi ukuze kungasebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Uzikhubaza kanjani izexwayiso zokuqeqesha ku-Apple Watch
Amahemuhemu amasha akhomba izinguquko ezincane ekwakhiweni kabusha kwe-iPhone SE 3 (noma i-SE Plus)